Talooyin in aad ogaato oo ku saabsan Apple Music vs. Spotify Music vs. Google Play Music
Adeeg geeyo Music ayaa music jaban oo la awoodi karo in kuwii ku caashaqi jiray music. Iyadoo adeeggan, kuwii ku caashaqi jiray music hadda ay helaan malaayiin music for Times ah bil kasta oo sida caadiga ah kharash $ 9.99. Iyadoo Times this, dadka isticmaala ku dhegeysan kartaa miyuusigga ka artist ah ama album aan bixinta mid kasta oo ka tareenka ama album laftiisa.
Inta badan music ka hoorto adeegyada ay bixiyaan Times oo lacag la'aan ah, laakiin la fursadaha xadidan halka users premium in ay helaan wax kasta oo ay doonayaan in ay leeyihiin. Users Premium badbaadin karo music for offline dhegeysiga, la abuuro ay playlist gaar ah iyo wax ka badan.
Waxaa jira adeegyo badan oo geeyo music heli karo laakiin oo kaliya wax yar oo ka mid ah waa caan ah. Adeegyada caanka ah waxaa ka mid ah Apple Music, Spotify iyo Music Play Google.
Qaybta 1.Apple Music
Qaybta 3.Google Play Music
Apple Music waa hawshii geeyo music ugu danbeeyay soo bandhigay by Shirkadda Apple aad loo jecel yahay. Sida laga soo xigtay Apple ah, Apple Music waa 'jidadkiisa oo dhammu aad u jecel muusiga, oo dhan hal meel ah'.
Apple Music kuu ogolaanaya inaad si ay helaan malaayiin xaq music in aad qalab Apple oo ah lacag yar bil kasta. Waxa kale oo kuu ogolaanaya in aad isu online iyo offline playlist xaq in aad qalab Apple. Waxaad dhegaysan kartaa music ka fanaaniinta aad jeceshahay ama album. Waxa kale oo aad marin u profile network bulshada artist ee aan ka tagay app Apple Music.
Sii daynta Music Apple ayaa sidoo kale keenay app suurta galinaya music qalabka Apple la playlist caado. Music Apple ayaa sidoo kale waxa uu saldhig 24/7 radio diyaar u ah qof kasta si aad u dhegaysato. Cusub Apple Music app ayaa Music Beats dhafan waa in.
Adeegan waxaa heli kara kaliya dadka isticmaala qalabka Apple. Isticmaalayaasha aan aaladaha Apple sida iPhone, iPad, iPod iyo Mac ma heli karaa app Apple Music. Waxaa kale oo lacag la'aan ah 3dii bilood ee ugu horeysay in dadka isticmaala oo markaas lacag bil kasta oo ah $ 9.99 ee shakhsiyaadka iyo $14.99 ilaa 6 qalab kale oo loo yaqaan qorshaha qoyska.
Spotify sidoo kale waa mid ka mid ah adeegyada geeyo music caan ah oo la malaayiin music diyaar u isticmaala in ay dhagaystaan ​​arrinta ma meesha ay joogaan ama qalabka ay isticmaalayaan la joogo in. Waxaa la sheegay in mid ka mid ah ugu wanaagsan ee adeegyada geeyo music heli karaa sifooyinka aad u badan sida adeegyada kale geeyo music.
Spotify taageertaa kasta madal. Waxaa jira Spotify app for dhan ku dhowaad dhammaan hababka qalliinka iyo Qalabka telefoonada gacanta. Waxaa Android, macruufka, Mac, Linux ama Windows Haddii, Spotify ayaa app ah laga heli karo waxaa ka. Waxa kale oo uu leeyahay ciyaaryahan internetka isticmaala kuwaas oo aan diyaar u ah inay soo bixi app ah. Waa in aad daqiiqad kasta in aad on your computer, qalab mobile ama kiniin waxay keentaa music, waxaad heli kartaa meel kasta oo music aad rabto.
Sida dhammaan adeegyada geeyo music, Spotify kale oo uu leeyahay Times premium heli karo. Dadka isticmaala cusub, ay u oggolaadaan Times premium 3 bilood kaliya $ 0.99 $ 9.99 oo markaas ka dib.
Adeegga Spotify ayaa madal warbaahinta bulshada halkaas oo dadka isticmaala wadaagi karaan playlists iyo waxa ay dhagaystaan ​​on Spotify saaxiibada. Waxaa kale oo u ogolaanaya dadka isticmaala lacagta caymiska in ay dhagaystaan ​​oo ay music offline xitaa haddii aanay online. Users sidoo kale ka heli kartaa playlists ay ku badbaadi eegin qalabka ay isticmaalayaan inta ay saxeexaan in ay xisaabta.
Laga soo bilaabo magaca, kuu sheegi karaa in Play music Google ay leedahay Google. Ku raaxayso music aan xad lahayn oo la Music Play Google on qalab aad. Music Play Google ayaa sidoo kale qeyb ka yahay tartanka adduunka adeeg geeyo music ah. Waxay leedahay sifooyinka la mid ah adeegyada kale geeyo. Waxaa isticmaala siinayaa helaan aan xad lahayn si ay u heeso aan xad lahayn midig qalabka aad.
Mid kasta oo ka mid ah adeega music geeyo maanta waxay leedahay khad premium oo sidaas sameeya Google. Wixii kaliya $ 9.99, waxaad marin u leedahay music aan xad lahayn oo ku saabsan qalab aad yeelan doontaa. Waxa kale oo kuu ogolaanaya in maxkamad 30 maalmood oo lacag la'aan ah qaababka caymiska in dadka isticmaala cusub
Version ayaa lacag la'aan ah ma aha in u xun sababtoo ah waxa ay ku tusaysaa xayeysiis u lahayn in ay users taasoo ka dhigan tahay xitaa dadka isticmaala lacag la'aan ah ku raaxaysan karaan xayeysiiska music free duwan qaar ka mid ah adeegyada geeyo music in ay muujiyaan xayeysiis looga xumaado in dadka isticmaala ay lacag la'aan ah. In kasta oo isticmaala lacag la'aan ah ay leeyihiin xad heeso ay dhegeystaan ​​oo ay iyagu kuma ay dhegaysan kartaa raadiyaha la qashanka aan xad lahayn oo macnaheedu waxaa jira qadar kooban oo qashanka ee raadiyaha.
Shaxda hoose waxay muujinaysaa barbardhigo u dhexeeya adeegyada geeyo music sare kuwaas oo Apple Music, Spotify iyo Google Play Music.
Isbarbar kor ku xusan waxaa loogu tala galay saddexda adeegyada geeyo music weyn ee la heli karo. Music Apple waa adeeg ugu dambeeyay geeyo music oo sidaas daraaddeed aan wax badan laga odhan karaa oo ku saabsan. Muuqaaladan ku qoran yihiin muuqaalada kasta oo iyaga ka mid ah markii uu qoraal this post.
Laga soo bilaabo miiska, waxaa la odhan karaa in dhammaan adeegyada geeyo music qaadaan tiro la mid ah taas oo ah $ 9.99 oo ay tahay oo kaliya in Google ma ogola in la wadaago Qoyska. Sidoo kale, oo dhan waxay leeyihiin in ka badan 30 milyan oo kuwan raadkaygay ku users maktabadda ka tagay si ay u sii fikirin on kaas oo adeeg si ay u isticmaalaan.
macruufka, Android, PC, Mac, TV Apple, web macruufka, Android, Windows Phone, Blackberry, PC, Mac, PS3, PS4, sanduuqyo kala duwan set-top, web macruufka, Android, web
Haa, oo leh waxyaabo xaddidan Haa, iyadoo xayeysiis YesYes, oo leh waxyaabo xaddidan
Saddex bilood No laakiin 3 bilood ee ugu horeysay ee $ 0.99 oo kaliya 30 maalmood
Haa, $14.99 bil kasta, ilaa 6 users Haa, $ 5 bishiiba user N / A
Haa, Times la bixiyo Haa, Times la bixiyo Haa, Times la bixiyo
256 kbps Ilaa 320 kbps Ilaa 320 kbps
Network bulshada Artist
Haa No No
> Resource > Android > Talooyin aad ka ogaato ku saabsan Apple Music vs. Spotify Music vs. Google Play Music